archana: election update
विश्व लाई नै चकित पार्ने गरेर एतिहासिक चुनाव सम्पन्न भयो। जिम्मी कार्टर लगायत सारा विश्वले नेपालको शान्ती पूर्वक सन्चालन भएको चुनाव हेरेको हेर्यै भए।
चुनावको अघिल्लो दिन सम्म पनि के के न होला भनेर सबैमा त्रास थियो तर नेपालमै पहिलो पटक भएको सम्बिधान सभाको चुनावमा सहभागी हुन उत्साह पनि कम त थिएन। मेरो क्षेत्र न. ३ पर्दछ त्यहाँ करीब ६:३० बजे देखी लाइनमा मानिसहरु बसेका थिए । बिहान पख एकदम भिड थियो सबै जना समयमै भोट दिएर ढुक्क भएर बस्न चाहन्थे।
म करिब ११ बजे तिर भोट हाल्न जादा लाइन लामै थियो। पुरुष को भन्दा महिला को लाइन लामो थियो। के बुढा के युवा के जवान सबैको अनुहारमा एक किसिम को उत्साह देखिन्थ्यो । टाइफाइड् भएर बिरामी परेका पनि आफ्नो अमुल्य भोट खसाल्न आएका थिए ।
गर्मीले गर्दा सबै जना छाता ओढेर बसेका थिए र बेला बेलामा त्यहाँका volunteer ले पानी पनि सप्लाई गरी रहेका थिए। रातो घेरा भित्र म। करिब १ घन्टामा मेरो पालो आयो। लाइनमा बस्दा आइमाइहरु गफिदा समय बितेको पत्तै भएन।
यि ७० बर्षका बुढाले त एक घण्टा त्यस्तो प्रचन्ड गर्मीमा लाइनमा बसेर भोट हाले ।
केटा केटी हरु पनि आफ्नो आमाहरुको पछी लागेर रमाइलो हेर्न आएका थिए। बुढा बुढीहरुलाई बिशेष रुचीका साथ आएका थिए कसलाइ बोकेर ल्याइएको थियो कसैलाइ हात समातेर ल्याइएको थियो। उनी हरु भन्दै थिए आफु मर्ने बेलामा भबिस्यका सन्ततिलाई उज्जल नेपाल छोडेर जान चाहेको इच्छा राखे ।
Posted by archana at 4/10/2008
Sheetal Thapaliya said...
Archana election was peaceful and nice but result is comming worse.. Any way we have to accept JANAMAT.
नयाँ नेपालको लागि नयाँ प्रतिनिधि